जसपामा एकल अध्यक्ष रहने गरी विधान संशोधनको तयारी
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई अब फरक प्रणालीबाट चलाउनेबारे छलफल सुरु भएको छ । दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीले पार्टीलाई फलिफाप नभएको तर्क गर्दै कार्यकर्ताले फरक प्रणालीमा पार्टी चलाउन सुझाब दिएका छन् । निर्व...
२४ साउन, २०७८
काठमाडौं उपत्यका घरेलु हिंसामुक्त : तीन वर्षमा एउटा मात्रै घटना !
काठमााडौं उपत्यका घरेलु हिंसाको समस्याबाट मुक्त रहेको पाइएको छ । देशभरि घरेलु हिंसाका घटना बढ्दो ग्राफमा रहेको बेला उपत्यकामा भने घरेलु हिंसाको ग्राफ माथि उक्लिन सकेको छैन । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीप...
नेपाल प्रहरीको आँकडाले मुलुकमा पछिल्लो समय अपराधको ग्राफ उकालो चढिरहेको देखाउँछ । जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराध तथा महिलासँग सम्बन्धित, लागूऔषधजस्ता अन्य अपराधको रफ्तार पनि बढ्दै गएको छ । प्रहरी मुख्यालयको त...
महन्थ रणनीति : असन्तुष्टलाई तानेर पार्टी फुटाउने !
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले सल्टाएको एक साता नाघिसकेको छ । आयोगले जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्यको ‘हेड काउन्ट’ गर्दै आधिकारिकताको ‘लाइसेन्स’ ११ ...